Bamka la banneyn karo Cayayaanka korontada laga saaro
$ 34.18 qiimaha joogtada ah $ 35.98
Batariga laga saari karo Cayayaanka Korantada ee korantada lagu shubo - Buluug gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waqtiga la Adeegsaday:> 480 Saacadood
Cabbirka Saamiga:1m * 1m
Aagga la dabaqi karo:20-50 mitir laba jibbaaran
Bixiyaha:Dib loo dhigo
Product:Laydhka Korontada ee Korontada Ku Dilay
xirxirida:Kaadhka Kaarka Blister
Nooc kaneecada:Dhaqdhaqaaqa Korontada Korontada
Category:Soo celinta Kaneecada
Batariyada lithium: 400mAh
Xilliga shubista: Ka badan 500-Time User loogu talagalay maalmaha 10 ee hal kumbuyuutar ah Iyadoo madaxbannaanida LED-ka ee madaxbannaan
Qalabka Broadband: 220V-50Hz / 110V-60Hz
Dhererka dilka xayawaanka: 50cm Net Area: 24cm x19cm
Tilmaamaha: 1-Fadlan riix fiilada kuleylka oo ka saar batoonka "OFF" marka qalabku shaqeynayo. Dib u cusbooneysii korantada ka dib markaad buuxiso. Waqtiyada dib u soo celinta waxay ku dhowdahay 12 saacadood. 2-Fadlan ka wareeji batoonka "ON1" oo ku dhaji batoonka badhanka markaad isticmaaleyso swatter dilidda Cayayaanka (Ha riixin batoonka ama ha taaban dusha shabaqa) .Indicator ayaa hadda ifaya. 3, Ka saar badhanka booska "ON2", Nalka ayaa ifaya. Digniin: 1, Fo r mor, ha riixin batoonka ama ha taaban dusha shabaqa marka dhididku mas'uul ka yahay. 3- Ka saar batoonka booska "ON2", Iftiinka LED-ka ayaa shidan. Digniin: 1- Si aad u hesho badbaado dheeraad ah, ha riixin batoonka ama ha taabanin dusha shabaqa marka dhididka uu mas'uul ka yahay. 2-Fadlan far ha saarin shabaqa lakabka dhexdhexaadka ah 3-Fadlan u rux swatter ka nadiifinta bakhtiga cayayaanka ee ku jira shabakada. Hubi inaadan ku dhaqin biyo si aad uga fogaato wareegga gaaban. 4-Kala bixiyaha wuxuu noqon karaa mid aan lahayn-danab sare ama xaalado danab hooseeya marka uu qoyo qoyaanka cimilada qoyan, saameynta waa ladiidi doonaa. Markaa, waa lagu qalali karaa iyadoo lagu afuufayo qalabka wax lagu xiro korantada ama ku iftiimiya qorraxda, saameynta ayaa dhakhso loo soo kaban. 5-Caruurta waa in la baro iyadoo ay qaangaarayaan markay isticmaalayaan.
Aad u fiicnaadeen, waxay yimaadeen 9 maalmood, shaqeyn weyn, tayo sare leh. Si sahlan u qaadista dhiqlayaasha qashin qubka marka ay taabato qalab.
waa mid fantastik ah oo dhakhso lehna uugu mahadcelinaya wax badan
tayo wanaagsan oo waxtar leh